Home AKUKO UWA Akuko Ala Anyi KAMRA ONYE ISI DANGOTE CEMENT NKE INDIA
Deep Kamra, onye India na-elekọta ụlọ ciment nke ụlọ ọrụ Dangote Industries Limited nke Nigeria nọ na Ethiopia gburu na Wednesday mgbe e wakporo ya na mpaghara Oromiya fọdụrụnụ ka ọ na-alọghachi na Addis Ababa site na ụlọ ọrụ ahụ.
Ma odeakwụkwọ na ọkwọ ụgbọala nke Kamra, onye bụ onye nchịkwa obodo nke Dangote Cement, na-agbapụkwa ndị na-awakpo ya.
E nyere Dangote osisi, otu n’ime iri ndị e guzobere n’Africa na n’èzí Nigeria, nyere ya na May 2015.
Ụlọ osisi 2.5Mta, nke na-erughị 90km site na Addis Ababa, bụ ụlọ simenti kachasị ukwuu na Etiopia nke nwere ike ịmepụta akwa 32.5 na 42.5-ọkwa iji gboo mkpa ahịa, na ụgwọ asọmpi. Ọ nwere ihe dị ka 223 nde tonnes n’ụba ala.
Oromiya, nke gbara Addis Ababa gburugburu, bu ihe ojoo na-aru ihe kariri afo abuo, nke ndi mmadu na-eto eto na-eme ka ha di na ya.
KEDU IHE ICHE GBASARA EGO NNUKWU NDI MMADU NA ANA GBASARA EGO INU NWANYI
Ọtụtụ narị mmadụ nwụrụ n’ihi ime ihe ike nke na-egosipụta na 2015 site na ngosipụta banyere ikike ala, tupu ha agbasawanye na-agbakọta n’elu nnwere onwe na-agbasa na mpaghara ndị ọzọ.
N’oge ọgba aghara, ndị na-eme mkpesa na-enwupụta ụgbọala ụfọdụ.
“Onye nduzi nke ụlọ ọrụ ahụ nwụrụ mgbe agha ndị omempụ a na-amaghị ama mere mgbe ọ na-alọghachi n’aka ụlọ ọrụ ahụ na ụlọ ọrụ abụọ,” ka otu akụkọ gọọmentị kwuru.
“Ndị agha nchebe na-achọ ugbu a ndị na-eti mkpu,” ka ọ gbakwunyere.
NJIKO NA-EDUZI ULE NYOCHA N&#8217;EFU MAKA UMUAKA NA FCT
Nkwupụta ahụ na-akpọ ndị bi n’ógbè ahụ iji nyere aka n’ịkọkọta nkọwa.
Obodo ahụ ka nọ n’okpuru ọnọdụ mberede nke a na-etinye na February, ụbọchị mgbe praịm minista Hailemariam Desalegn gbara arụkwaghịm.
Ọfịsa ndị agha bụ Abiy Ahmed anọchiwo ya ugbu a.
NDI OCHICHI PDP NA-AKWADO NTUGHARI NDI MMADU
Ebe ọ bụ na ọ na-ebute ọgba aghara nke na-eme ka mmekọrịta ndị ọchịchị ghara ijide onwe ya, Abiy agbawo nkwa “mmalite ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọhụrụ” tinyere ikike ndị nwe obodo.
A tọhapụrụ puku kwuru puku kemgbe January, gụnyere ndị nta akụkọ na ndị ọgba aghara ndị a tụrụ mkpọrọ maka ọtụtụ ebubo gụnyere iyi ọha egwu
« PRESIDENT BUHARI N’AMALITE EZUMIKE UBOCHI ANO NA UK » NDI GOOMENTI NA-ATU EGWU INWETA EGO IKWU UGWO MMANU SITE N’AKA NNPC
Previous article PRESIDENT BUHARI N’AMALITE EZUMIKE UBOCHI ANO NA UK
Next article NDI GOOMENTI NA-ATU EGWU INWETA EGO IKWU UGWO MMANU SITE N’AKA NNPC